ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက် လူပျိုစစ် ၊မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင်ပါတယ်… -
ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက် လူပျိုစစ် ၊မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင်ပါတယ်…
အမျိုးသား အားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင် အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စ မစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ…
သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်း လွဲပါလိမ့်မယ်။
လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ် ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ် ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အချစ်ရေး အဆင်ပြေမှု ရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံး မသက်ဆိုင်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ လူကောင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သူ့အတွေ့အကြုံ ရှိမှု သို့မဟုတ် မရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မိမိတို့အချစ်ရေး ဆက်ဆံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို အဓိကထားကြည့်ပါ….
၁။ သင်နဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေနား ရောက်လို့ သူအရမ်း ရှက်နေတယ်၊ မတော်တဆ အနည်းငယ် ထိမိတာတောင် ရှောင်ဖယ်နေရင် သူဟာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ နေသားမကျသေးတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ခပ်လှမ်းလှမ်း နေတတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ သူ့ကို အနည်းငယ် စနောက်ရင်တောင် မျက်နှာ နီရဲလာပါတယ်။
၃။ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ တောင်းဆိုအခါမျိုးမှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်မတတ် ခံစားတတ်ပါတယ်။ သူ့ကို တို့ထိကြည့်ပါ။ လေဖြတ်သလို တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
၄။ ပူးပူးကပ်ကပ် နေဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သူ့အသံ တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။
အရမ်းရှက်တတ်တဲ့ လူပျိုစစ်တဲ့ အမျိုးသားတချို့ဆိုရင် မိန်းကလေးနဲ့ ပထမဆုံး ထိတွေ့တဲ့အခါ မျက်ရည်တောင် ဝဲနေ တတ်ကြပါတယ်။
၅။ အိပ်ရာထဲ ရောက်တဲ့အခါ တစ်သက်မှာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ပုံစံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး စိတ်အားထက်သန်စွာ လိုက်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
#Achitlwinpyin Ref: Boldsky
ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ လူပ်ိဳစစ္ ၊မစစ္ကို ဒီအခ်က္ေတြကေန သိရွိသြားႏိုင္ပါတယ္…
အမ်ိဳးသား အားလုံးလိုလိုဟာ လူပ်ိဳဘဝကို အေစာႀကီး ဆုံးရႈံးတတ္ၾကတယ္လို႔ အမ်ားစုက ယူဆၾကသည့္တိုင္ အသက္ ၂၅၊ ၃၀ ထိေတာင္ ဖိုမကိစၥ မစမ္းသပ္ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕ ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ…
သူတို႔လည္း သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ သူ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဒိတ္လုပ္တဲ့ ေကာင္ေလးဟာ လူပ်ိဳစစ္မစစ္ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခန႔္မွန္းသိရွိႏိုင္မယ့္ လကၡဏာရပ္တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ တခါတရံ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ လြဲေကာင္း လြဲပါလိမ့္မယ္။
လူပ်ိဳစစ္မစစ္ သူသာအသိဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပေနေသးတယ္ဆိုရင္ လူပ်ိဳစစ္စစ္ေတြ ျပဳမူတတ္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လူပ်ိဳစစ္စစ္ ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတာနဲ႔ သူ႔အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပမႈ ရွိတယ္ မရွိဘူးဆိုတာကေတာ့ လုံးလုံး မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ လူေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ သူ႔အေတြ႕အႀကဳံ ရွိမႈ သို႔မဟုတ္ မရွိမႈေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ မဆုံးျဖတ္ပါနဲ႔။ မိမိတို႔အခ်စ္ေရး ဆက္ဆံမႈရဲ႕ အႏွစ္သာရကို အဓိကထားၾကည့္ပါ….
၁။ သင္နဲ႔ တျခားမိန္းကေလးေတြနား ေရာက္လို႔ သူအရမ္း ရွက္ေနတယ္၊ မေတာ္တဆ အနည္းငယ္ ထိမိတာေတာင္ ေရွာင္ဖယ္ေနရင္ သူဟာ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ ေနသားမက်ေသးတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ခပ္လွမ္းလွမ္း ေနတတ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ သူ႔ကို အနည္းငယ္ စေနာက္ရင္ေတာင္ မ်က္ႏွာ နီရဲလာပါတယ္။
၃။ အျပင္မွာေတြ႕ဖို႔ ေတာင္းဆိုအခါမ်ိဳးမွာ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္မတတ္ ခံစားတတ္ပါတယ္။ သူ႔ကို တို႔ထိၾကည့္ပါ။ ေလျဖတ္သလို တုန္တုန္ရင္ရင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
၄။ ပူးပူးကပ္ကပ္ ေနဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ သူ႔အသံ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းၿပီး ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ ေျပာဆိုပါလိမ့္မယ္။
အရမ္းရွက္တတ္တဲ့ လူပ်ိဳစစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕ဆိုရင္ မိန္းကေလးနဲ႔ ပထမဆုံး ထိေတြ႕တဲ့အခါ မ်က္ရည္ေတာင္ ဝဲေန တတ္ၾကပါတယ္။
၅။ အိပ္ရာထဲ ေရာက္တဲ့အခါ တစ္သက္မွာ ကိုယ္လုံးတီးနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မျမင္ဘူးတဲ့ ပုံစံနဲ႔ တစ္ကိုယ္လုံး စိတ္အားထက္သန္စြာ လိုက္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မယ္။
မှဲ့ က ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး…
မှဲ့ က ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… ပါးပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှ အောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင် ချောနေ လန်ထွက် နေပါစေ ၊ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြတတ်ဘူး။ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါတတ်ပါတယ် ……။ နဖူးပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” သနားတတ်တဲ့စိတ် အားနာတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက် ရတတ်တယ်။ အဲ့ချစ်သူက အနိုင်ယူတာ ခဏခဏငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာကြုံရ တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ချစ်သူကပဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိ ချစ်မယ့်သူ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ …။ မျက်ခုံး တစ်ဝိုက်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” အချစ်စစ်ရဖို့ အချိန်တွေ မနည်းရင်းရ …
(၇) ရက် သားသီးများအတွက် အချစ်ဗေဒင် ဟောကိန်း . . . . . . .
(၇) ရက် သားသီးများအတွက် အချစ်ဗေဒင် ဟောကိန်း . . . . . . . တနင်္ဂနွေ အချစ်ရေး . . . . . ချစ်ရတဲ့သူကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ အနေဝေးနေကြတတ်ပါတယ်၊ ချစ်သူက အနိုင်ယူတာမျိုး ခဏခဏ ငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ချစ်သူကဘဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်သွားမယ် ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ . . . . . . တနလာၤ အချစ်ရေး . . . . . ချစ်သူရဲ့ ချော့တာလေးကို …
လူကြီးဆန်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ကိုကိုတွေကို ချစ်သူတော်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
လူကြီးဆန်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ကိုကိုတွေကို ချစ်သူတော်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ချစ်သူဆိုတာမျိုးက အချစ်တွေကြောင့် ဖြစ်လာတာဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိုက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော် ဖြစ်မှသာ ရေရှည် လက်တွဲကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး တော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ချစ်သူ တော်တော်များများကတော့ သူတို့ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်လည်း ကြီးသလို ရင့်ကျက်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် လုပ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့က အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ ရင့်ကျက်တာကြောင့် ပြဿနာ နည်းမယ် သမီးရည်းစားတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာကတော့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ရင် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ကြတာပါပဲ။ သမီးရည်းစား သဘာဝ သဝန်တိုတာ၊ ရစ်တာနဲ့ …